Lionel Messi Oo Jeelka Loo Taxaabayo Haddii Uu Bixin Waayo €252,000 | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(08-07-2017) Xiddiga xulka Argentina ee Lionel Messi ayaa waajahaya xadhig 21 bilood ah oo uu ku mutaystay lunsi cashuur iyo lacago uu sifo khaldan uga qariyey waaxda cashuuraha, haddii uu bixin waayo lacag ganaax ah oo dhan €252,000.
Lionel Messi ayaa loo sheegay in 21-ka bilood ee xadhigga ah ee lagu riday uu jeelka geli doono haddii uu maalintiiba ku iibsan waayo lacag dhan €400, taas oo marka lagu dhufto 21-ka bilood noqonaysa €252,000.
Messi iyo aabbihii ayaa lagu helay inay sannadihii u dhexeeyey 2007 iyo 2009 waaxda Cashuuraha ee Spain kala baxsadeen lacag dhan €4.1m, waxaana Messi lagu xukumay 21 bilood oo xadhig ah, halka aabihiina ay maxkamaddu amartay 15 bilood in xabsiga loo taxaabo, hase yeeshee, labadan is dhalay ayaa xukunkooda ku beddelan karaya lacag.
Aabaha dhalay Messi oo lagu magacaabo Jorge ayaa isaguna ku beddelan karaya xadhigga lacag dhan €180,000.
Labadan nin ee is dhalay ayaa ay maxkamaddu ogaatay in lacagaha ay kala baxsadeen waaxda cashuuraha ay ku qarsadeen waddanka Uruguay.
Xukunka maxkamaddu kuma ekka oo kaliya xadhiga ay ganaaxa ku beddelan karayaan, hase yeeshee, waxa kale oo lagu riday oo ay tahay inay bixiyaan lacag kala ah: Messi €2m iyo Jorge oo ay tahay inuu u shubo dawladda Spain €1.5m. Si ay isku nadiifiyaan, waxay bixiyeen lacag dhan €5m bishii August ee sannadkii 2013, taas oo u dhiganta lacagta cashuurta ah ee laga doonayay.
Maxkamadda sare ee Spain ayaa diidday rafcaan ay Messi iyo aabbihii Jorge ka qaateen bishii hore, laakiin waxay yaraysay xukunka lagu riday odayga Jorge oo la ogaaday inuu bixiyey qaybo ka mid ah lacagaha loo haysto.
Guulaha uu gaadhay Lionel Messi
bishii April ee sannadkan 2017, waxa uu buuxiyey tirada 500 gool oo uu u dhaliyey Barcelona.
Waxa uu ku guuleystay ciyaartoyga ugu fiican dunida ee FIFA Ballon d’Or shan jeer, waana ciyaartoyga kaliya ee tiro intaa le’eg xiddignimada hantiyey.
Saddex jeer ayuu noqday ciyaartoyga ugu fiican qaaradda Yurub.
Afar koob oo Champions League ah ayuu u qaaday Barcelona.
Siddeed koob oo horyaalka LaLiga ah ayuu kula guuleystay kooxdiisa Barceloa.
Waxa uu jebiyey rikoodhka ciyaartoyga ugu goolasha badan waddanka pain.
Argentina ayuu sannadkii 2008 kula guuleystay koobka Olympic-ga oo dalkiisu qaaday.
Waa ciyaartoyga ugu goolasha badan xulka qaranka Argentina, waxaanu dhaliyey 55 gool.
Dhibaatooyinka uu la kulmay:
16 June 2016: Waxa uu shaaciyey inuu ka fadhiistay ciyaaraha xulka qarankiisa markii koobka Copa America ay ciyaartii finalka iskugu soo hadheen Chile oo rikoodheyaal ku qaadday.
Waxay ahayd guul-darradii afraad ee xulka qaranka Argentina uu ku waayo koob iyadoo uu Messi dhex taagan yahay sagaalkii sannadood ee ugu dambeeyey.
Saddex guul darro oo aan la illoobi karin oo Messi uu la kulmay intii uu u ciyaarayay xulka qarankiisa, waxay ahaayeen Copa America oo sannadkii 2005 ay Chile kaga qaadday (Waxay ahayd markii labaad ee rikoodheyaal ay Chile kaga qaaddo koobka); 2014 xulka Germany ayaa ku karbaashay finalkii Koobka Adduunka; 2007 xulka qaranka Brazil ayaa ka qaaday Copa America.